Nabadoon Yasin Cabdisamad oo degmada Burtinle lagu soo dhaweeyey (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Nabadoon Yasin Cabdisamad oo degmada Burtinle lagu soo dhaweeyey (Sawiro)
Nabadoon Yasin Cabdisamad oo degmada Burtinle lagu soo dhaweeyey (Sawiro)
December 30, 2012 - By: Hanad Askar
Degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey Nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo dib u helay xoriyadiisii kadib markii uu ku jirey xabsiga weyn ee garowe muddo 7 maalmood ah isaga oo aan wax maxkmad ah la geyn wax denbi ahna lagu soo oogin.
Waxaa soo dhaweynta nabadoonka ka qaybqaatey Maamulka degmada Burtinle iyo dadwayne aad u farabadan waxaana ay uga hortageen meel u jirta magaalada Burtinle 10km ka dibna waxaa loo soo galbiyey xarunta degmada Burtinle halkaas oo lagu qabtay xaflad soo dhawayn ah. Xafladaas waxaa daahfuray xoghayeha degmada Burtinle Muxyadiin oo raali galin ka bixiyey Nabadoonka xariga loo geystay cadeeyeyna in uu Nabadoonku dambi lahay asagoo ku sababeeyey sida deg-deg ah ee loo soo daayey iyo in an wax denbi ahba lagu soo oogin.
Sidoo kale waxaa ka hadlay xaflada soo dhawaynta ah ganacsade Muxyadiin Maxamed Xaashi oo ku dheeraaday soo dhawaynta Nabadoon Yaasiin waxaa mikrafoonka lagu soo dhaweeyey nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo ka sheekeeyey waxa lagu xiray isaga oo sheegay in ay ahayd xarig sharci darro ah, uu ahaa muwaadin Puntland xaqna u leh fikirkiisa iyo xoriyadiisa dhaq-dhaqaaq, waxaana uu ballan qaadey in uu sii wadi doono badbaadinta Puntland.
Nabadoon Yaasiin ayaa sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatooyin uu ku arkey xabsiga Garowe, dhismuhu waa meel baaba’a oo ay u denbeysey dayactir waqtigii Siyaad Barre dalka ka talinaayey, maxaabiistuna ay qabaan dhibaatooyin kala geddisan iyada oo ay jiraan kuwo aan maxkmadba la geyn oo meesha isaga xiran.
Burtinle, Puntland, Somaliya